စဉ်းစား စရာလေးများ (၁)… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » စဉ်းစား စရာလေးများ (၁)…
စဉ်းစား စရာလေးများ (၁)…
Posted by Ko out of... on Feb 21, 2012 in Think Different | 15 comments
၁။ တခါကမိုင်းရှုးတောင်ပေါ်သို့ ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရန် ရက်ကောင်းရက်မြတ်ကိုရွှေးချယ်ပြီးမှ စီးပွါးရေးရှာတဲ့ ကုန်သည်တစ်ဦးသည် ဒီနေ့ကပြသဒါးဆိုတော့ မတက်ဘူးဆိုပြီး ရက်ရာဇာဖြစ်တဲ့ နောက်တစ်ရက်ကိုရွှေးချယ်လိုက်တယ်။ ဒီလိုဘဲတဖက်မှာ ဓါးမြတိုက်ဖို့ ဓါးပြအဖွဲ့တွေကလည်း ဒီနေ့ဓါးမြတိုက်ရင် ပြသဒါးနေ့ဆိုတော့ တိုက်လို့ပစည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး နောက်နေ့ရက်ရွှေ့လိုက်တယ်။ နောက်တနေ့ ရက်ရာဇာရွှေးတာချင်းအတူတူ ကုန်သည်နှင့် ဓါးမြလမ်းမှာဆုံကြပါလေရော. . . ဓါးမြကဘဲ လူတွေ အများစု ဟာ ရက်ရာဇာရွှေးလွန်းလို့ သမင်တကာ အဲဒီရက် ကိုရွှေးလိုက်တာဘဲလား…(သို့) အရွှေးချင်းတူလို့ တိုက်ဆိုင် တာဘဲလား..
၂။ တခါတုံးက ခလုတ်တိုက်ပြီး ခြေမကွဲလို့ ဆေးဆရာတစ်ဦးထံလူနာတစ်ဦးရောက်သွားလေသည်။ ထိုလူနာသည် မိမိခြေထောက်ခလုတ်တိုက်မိလို့ ခြေမကွဲသွားကြောင်းအကြောင်းစုံ ပြောပြကာ ဆေးဆရာက သူ၏ခြေထောက်ကို ခဏလေးကြည့်ကာ.. ထိုဆေးဆရာက ခြေထောက်ကို ဆက်မကြည့်တော့ဘဲ သူ၏ မျက်စိကို ထပ်ခါတလဲလဲကြည့်ကာ လူနာသည်စိတ်မရှည်ဖြစ်ပြီး… ဆေးဆရာအား ခင်ဗျာကခြေမကွဲပါတယ်ဆိုမှ ဘာဖြစ်လို့ မျက်စိသွားကြည့်ရတာလဲ။ ခင်ဗျားဆေးဆရာအရူးဘဲ လို့စိတ်တိုတိုနဲ့ ဆေးဆရာကိုပြန်ပြောလေ၏။ ထိုအခါ ဆေးဆရာက ခင်ဗျုားရူးသလား ငါကဘဲရူးလေသလားဆိုတာ ငါရှင်းပြမယ်။ ခင်ဗျုားအခုလို ခလုတ်တိုက်တာ ခင်ဗျားမျက်စိ ကောင်းကောင်းမမြင်ရလို့ ခလုတ်တိုက်နေရတာ ခြေထောက်က အပြစ်မဟုတ်ဘူး။ မျက်စိကကောင်းကောင်းမမြင်လို့ကွလို့ဆိုလိုက်သတဲ့။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့တတွေလည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မမြင်ရဘဲ ခလုတ်တိုက်နေကြတာတွေဟာ အမြင်မှန် မရရှိကြသေးလို့ပါ . . .အမြင်မှန်ရဖို့ ကလည်းဘုရားညွှန်ပြခဲ့ပြီးပြီ ဖြစ်တယ်… နောက်လိုက်တွေကဘဲ…တခုခုများမှားနေလား ဆိုတာ…တွေးတောရင်း…
သိတော့ဘူး သူများ ဦးနှောက်က သိပ်မမှီလို့
ရက်ရာဇာမို့ ပြဿဒါးမို့ ဘယ်နေ့ ၊ဘယ်ခါရွေးမနေတာ အကောင်းဆုံးပါ။အားလုံးသောနေ့ သည်
ဆေးဆရာပြောတာလဲ မမှား၊လူနာပြောတာလဲမမှားလေတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ညှိယူလိုက်ပေါ့နော့်။
ဟဲဟဲတိုက်ဆိုင်သွားတာနေမှာပါ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ရက်ရွေးရတယ်လို့
သူ့မိန်းမ ကို သွားပြလို့ကတော့..
“တော့်ဖါသာ နမော်နီ နမော်မဲ့ လျှောက်လို့ဖြစ်တာ..”
ဘာဘာညာညာနဲ့. .စိတ်အခန့်မသင့်ရင် ခေါင်းပါ ပေါက်မဲ့ အဆင်ကြီး..
ဟုတ်ပါတယ် စပ်ဆက်ပြီးတွေးမယ်ဆိုရင် မှန်နေတာတွေ အများကြီးပဲ သို့ ပေမယ့်လည်း မှန်တဲ့အရာတိုင်းဟာ ဘ၀တိုးတက်ဖို့ အတွက်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါ ခလုတ်တိုက်နေတာတွေဟာလည်း ၂ဖက်အမြင်မရှင်သန်မရင့်ကျက်သေးလို့ ပါ…
ကို အောက်အော့ဖ်ရေ …
ပထမတစ်ခုကတော့ … မဆုံသင့်ပဲ ဆုံရတာပါ … ။ ကုန်သည်ကတော့ … ရက်ရာဇာ ၊ ပြသဒါးရွေးတာ … သူ့ပိုက်ဆံရင်း အလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက်လို့ … ဖြည့်တွေးလို့ရပေမယ့် …. ဒီနေ့ ကုန်ကူး ..ဒီနေ့ငွေရွှင်မှ … စိတ်ချရမှာ .. အချိန်ဆွဲနေလို့ .. ကိုယ့်ရဲ့ ကုန်က .. ပုပ်ကုန်ဆိုလျှင် … ရက်ရာဇာ ၊ ပြသဒါးစောင့်နေတာနဲ့ .. စီးပွားရေးထိခိုက်မယ် … ။
ဓါးပြကတော့ … တကယ်မငတ်တဲ့ ဓါးပြမို့လို့ ရက်ရာဇာတွေ ၊ ပြသဒါးတွေ စောင့်နိုင်တာလို့ ထင်ပါတယ် ….. တကယ်ငတ်လာလျှင် .. ရက်ရာဇာရောက်ဖို့ မစောင့်နိုင်ပဲ လှုပ်ရှားမယ်လို့ ထင်ပါရဲ့ … ။
ခြေမကွဲတဲ့ လူနဲ့ ဆေးဆရာကတော့ .. လွဲတော့လွဲနေတယ် ..နည်းနည်းလေးပါပဲ …. ။
ခြေမကွဲတဲ့ လူက … အကျိုးကို အရင်ကုခိုင်းတာ …
ဆေးဆရာကတော့ .. အကြောင်းကို အရင်ကုချင်တာ …. ။
(ကျွန်မအမြင်) ဖြစ်သင့်တာက .. အကျိုး(ခြေမကွဲခြင်း) ကို အရင်ကုပြီးမှ .. အကြောင်း(မျက်စိမကောင်းလို့ မမြင်တာ) ကို ကုသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် …
ဆေးဆရာ သဘောအရ အကြောင်းကိုအရင်ကုလျှင် .. နောက်အလားတူ ကိစ္စတွေ ထပ်မဖြစ်တော့ပေမယ့်ရထားတဲ့ ဒဏ်ရာလေးက .. တဆစ်ဆစ်နာလို့ … စိတ်ခုနေရမယ့်အတူတူ … ခြေမကွဲတာ အရင်ကု ပြီးမှ .. မျက်စိပါဆက်ကု …
Hinn…..should be thanks carefully about that.
rocker tun says:
၁၃ ဂဏန်း အိမ် ခြံ မြေ ကား ၀ယ်ရင် လွယ်ပြီး ရောင်းရင် ခက်တာ ဘာကြောင့်လဲ
There areafew explanations of just why 13 has developed the reputation for being unlucky:
In Christianity, the Last Supper had thirteen attendants, during which Jesus Christ revealed that one of the guests would betray him. Legend tells that afterward one of the Apostles, Judas Iscariot, did so and turned Jesus over to the Romans. This led to the crucifixion of Jesus. It is also claimed that Judas sat at the thirteenth place at the Last Supper’s table. Asaresult of this betrayal, the number 13 has maintainedabad reputation and hasasuperstitious characteristic in Christian culture.
Thirteen is the number of circles used in Kaballah’s Metatron’s Cube. Although this glyph was typically used asaprotective ward against demons and evil, its use in alchemy and magic may have led toadarker association with the form, much asapentagram or pentacle has.
The foiled Gunpowder Plot that threatened 17th Century England’s government consisted of thirteen original conspirators.
Apollo 13 was the only unsuccessful mission by the United States of America’s NASA program to landamission on the moon, although fortunately all of the craft’s crew returned to Earth safely.
In numerology, twelve is considered the number of completeness and thus thirteen was seen as disturbing that balance,
On Friday, 13 October 1307, Philip IV of France ordered the arrest of the (Christian) Knights Templar and seizure of all of their assets based on accusations of various forms of heresy. Some were later tortured and then burned at the stake. This is commonly believed to serve as the origin for the observance of Friday the 13th as an unlucky day, however, no record of the date’s importance asasuperstitious holiday is believed to exist before the 19th century.
Read more: http://wiki.answers.com/Q/Why_is_13_an_unlucky_number#ixzz28eB9yxpb
အဲ့ဒီ 13 ဂဏန်းပေါ့ .. ကျွန်မနဲ့ အတော် ကံစပ်တာ …. ။
ဖဲရိုက်လို့ 13ဆိုလျှင်အရမ်းသဘောကျတယ် … လုံးဝ ကုလားမတက်ဘူးတော့ … ။ ကျောင်းတက်တုန်းကပါ … ကားစီးရတာဝေးတော့ တလမ်းလုံးဆော့သွားကြတာ …… ဟီး
သူများတွေက 13ကို အထူး တလည်ကြောက်ကြပေမယ့် … ကျွန်မတော့ … လုံးဝ .. လုံးဝ မကြောက်ပါ ။ အယူလည်း မသီးပါ .. ဂဏန်းကို .. ဂဏန်းလို့သာ မှတ်ပါတယ် .. 13 ပဲဖြစ်ဖြစ် ..4ပဲဖြစ်ဖြစ် … နိုးပလုံပလုံ ….
၁၃ရက် ၄ ဂဏန်းကတော့ မိုးစက်အတွက် Lucky No. ပဲ ..
အဲဒီရက်ဆို လက်ဆောင်တွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကိုရတာ ;)
ဥပမာ.. ​၁ ဂဏန်းဆိုပါတော့.. ထိပ်ဆုံးစ ဖြစ်တာမို့.. ကောင်းတယ်ယူတာမျိုး..
၂ – ဆိုပါတော့.. မိနဲ့ဘ.. ၂ပါးမို့.. ကောင်းတယ်ယူတာမျိုး..
၃ – ဆိုပါတော့.. ရတနာသုံပါး.. ကောင်းတယ်ယူတာမျိုး..
၄ ဆိုပါတော့.. လေးလေးပင်ပင်.. နက်နက်နဲနဲရှိတာမို့.. ကောင်းတယ်ယူတာမျိုး..
၅ ဆိုပါတော့.. ပဉ္စ ၀ဂ္ဂီငါးဦးမို့… ကောင်းတယ်ယူတာမျိုး.. ကောင်းတယ်ယူတာမျိုး..
၆ ဆိုပါတော့.. ဗုဒ္ဓက.. ဒုက္ခရစရိယာကို ခြောက်နှစ်ကျင့်ရတာမို့.. ကောင်းတယ်ယူတာမျိုး..
၇ ဆိုပါတော့.. လပ်ကီးဆဲဗဲင်း… ကောင်းတယ်ယူတာမျိုး.. ကောင်းတယ်ယူတာမျိုး..
၈ ဆိုပါတော့.. ၈ပါးသီလမို့… ကောင်းတယ်ယူတာမျိုး.. ကောင်းတယ်ယူတာမျိုး..
၉ ဆိုပါတော့.. ဂဏန်းကြီးမို့ .. ကောင်းတယ်ယူတာမျိုး..
ကျန်တာတော့ မပြောတတ်ဘူး..တနင်္လာနှစ်ခါပြန် ဆိုတာတော့ မှန်တယ်တော့… နှစ်ခါပြန်လုပ်ရတဲ့နေ့ကို ပြန်သတိထားကြည့်လိုက်တိုင်း တနင်္လာနေ့ ဖြစ်နေတာချည်းပဲ… မယုံချင်ဘဲ ယုံထားရတာ…